काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले ५ हजार २ सय २७ रिक्त दरबन्दीमा भर्ना आह्वान गरेको छ । नेपाल प्रहरीले प्रहरी जवान (जनपद) पदमा खुला प्रतियोगिताद्धारा पदपूर्ति गर्ने गरी दरखास्त आह्वान गरेको हो । नेपाल प्रहरीले ५ हजारभन्दा बढी युवाहरुलाई प्रहरी जवान पदका लागि भर्ना हुन सूचना जारी गरेको छ । प्रहरी प्रधान ...
लोकसेवाले खुलायो ६३८ पदमा (विज्ञापन स...
आश्विन २९, 2077 काठमाडौँ । लोकेसवा आयोगले ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्नाको तयारी थालेको छ । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) र द्वितीय श्रेणी (उपसचिव पद) को रिक्त स्थान पूर्तिका लागि आयोगले बुधबार ६ सय ३८ पदको लागि विज्ञापन प्रकाशित ग...
कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश २ सरकारले ...
आश्विन १३, 2077 जनकपुर । प्रदेश २ सरकारले प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले प्रदेशमा प्राविधिक कर्मचारी नियुक्तिका लागि स्वीकृति दिएको हो । बैठकले प्रदेश लोक सेवा...
अन्ततः रोकिएका लोकसेवा आयोगका सबै परी...
आश्विन १०, 2077 काठमाडौं । के तपाई लोकसेवा आयोगको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो ? के कोरोना संक्रमणले स्थगित भएको लोकसेवा आयोगका विज्ञापनहरु नखुल्ने हुन् की भनेर चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो ? यदी त्यसो हो भने तपाईको सबै चिन्ता दूर गर्दै चाँडै लोकसेवा आय...
लोकसेवा आयोगले थाल्यो स्थायी कर्मचारी...
भाद्र १९, 2077 बुटवल । कोरोना संक्रमणबाट देश ठप्प छ । यही बेला मुलुक प्रादेशिक संरचनामा पुगेपछि पहिलो पटक प्रदेश नं. ५ ले प्रदेशबाटै स्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्यतर्फका सातौं र आठौं तह र इन्जिनियरिङतर्फको सातौं...
प्रमुख प्रशाषकीय अधिकृत बन्न महिला कर...
श्रावण १५, 2077 काठमाडौँ । देश संघीय संरचनामा गएको छ । कानुनतः मुलुक समावेशी चरित्रको छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस्तो नयाँ अफर ल्याएको छ, जसले महिला कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ...
स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तर जिल्ला ...
श्रावण ३, 2077 काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २६ जना स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तर जिल्ला सरुवा गरेको छ । सुरुमा स्थानीय तहको माग संकलन गरेर आयोग पठाएको मन्त्रालयले आयोगको नतिजा नआउँदै...
लोक सेवा आयोगले निकाल्यो सहसचिवको नति...
असार २६, 2077 काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले सहसचिवको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले यही असार १८ गतेदेखि २६ गतेसम्म सञ्चालन गरेको अन्तर्वार्ता, मामिला प्रस्तुतीकरण र लिखित परीक्षा समेतको प्राप्ताङ्कका आधारमा सफल भएका १० जना सहसचिवको नति...
प्रदेश नं. १ मा ११ हजार प्रहरी दरबन्द...
असार २३, 2077 विराटनगर । कोरोना भाइरसको संक्रमणका काराण लामो बेरोजगारको संख्या बढ्ने अवस्था आइरहेका बेला प्रदेश सरकारले भने नेपाल प्रहरीमा ठूलो संख्यामा दरवन्दी खुलाउने भएको छ । प्रदेश १ सरकारले प्रदेशमा ११ हजार प्रहरी दरबन्दी रहने गरी...
६३ सह-सचिवको सरुवा : को कहाँ सरुवा भए...
असार २१, 2077 काठमाडौं । सरकारले एकैपटक ६३ जना सहसचिबको सरुवा गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार केही दिनअघि नियुक्त २२ जनासहित अन्य विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयमा कार्यरत ४१ जना राजपत्रांकित प्रथम श...
यी हुन् लोकसेवा आयोगमा नाम निकाल्न सफ...
असार १२, 2077 काठमाडौं । नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (आ प्रा) सहसचिवमा २२ जनाले नाम निकालेका छन् । सिफारिस भएका सहसचिवमा कास्कीका नवराज ढुंगाना, ओखलढुंगाका तीर्थराज भट्टराई र कैलालीका लीलाप्रसाद शर्मा, लमजुङका बन्धुप्रसाद...
लोक सेवा आयोगले गर्‍यो यस्तो निर्णय, ...
जेष्ठ ५, 2077 काठमाडौं । लकडाउनका कारण रोकिएका लोक सेवा आयोगका परिक्षा लकडाउनपछि अवस्था सामान्य बन्नसाथ सञ्चालन हुने भएको छ । आयोगले कुनै एक चरणको परीक्षा सन्चालन भइसकेका पदहरुका बाँकी परीक्षा देशको अवस्था सामान्य भएपछि लिने भएको छ । स...
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ६...
बैसाख ३०, 2077 काठमाडौं । गत डिसेम्बरको अन्त्यबाट चीनको बुहान शरहबाट सुरु भएको कोरोना संक्रमणले विश्व हल्लाइदिएको छ । त्यसको प्रभाव साना ठूला अधिकांस देशमा परेको छ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशलाई झन ठूलो असर गरेको छ । कारोनाको संक्रमणक...
लोक सेवा आयोगले भन्योः विज्ञापन रोकिए...
बैसाख २५, 2077 काठमाडौं । सरकारले लोक सेवा आयोगले लिँदै आएका सम्पर्ण परीक्षा रोक्न निर्देशन दिएपछि लोक सेवाको विज्ञापनअनुसार फारम भरेका र पहिलो चरणका परीक्षा दिएका चिन्तामा थिए । तर, लोक सेवा आयोगले चिन्तामा परेका परीक्षार्थीलाई सान्त्वन...
लोकसेवाका परिक्षा स्थगित हुँदा परिक्ष...
बैसाख २३, 2077 काठमाडौं । लोकसेवाका सबै परीक्षा कार्यक्रम स्थगित भएपछि परीक्षाका क्रममा रहेका युवा चिन्तित बनेका छन् । लोकसेवा आयोग ऐनमा एक चरणको परीक्षा भइसकेको पदपूर्तिको प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने प्रावधान छ । लोकसेवाले ६ सय शाखा अधिकृत...